Isaziso Sezomthetho Nemibandela Yokusebenzisa Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Imininingwane yakho nobumfihlo bakho kubaluleke kakhulu kule webhusayithi futhi yingakho ngincoma ukuthi nawe ufunde Inqubomgomo Yobumfihlo.
Ekusetshenzisweni kwabalandeli bewebhu.online uMsebenzisi uthembisa ukungafinyeleli kunoma yikuphi ukuziphatha okungalimaza isithombe, izintshisekelo kanye namalungelo abalandeli.online noma izinkampani zangaphandle noma ezingalimaza, zivimbele noma zilayishe abalandeli bewebhu kakhulu. online noma okungavimba, nganoma iyiphi indlela, ukusetshenziswa okujwayelekile kwewebhu.
abalandeli.online isebenzisa izindlela zokuphepha ezanele zokubona ubukhona bamagciwane. Kodwa-ke, umsebenzisi kufanele azi ukuthi izindlela zokuphepha zezinhlelo zamakhompiyutha kwi-Intanethi azithembekile ngokuphelele nokuthi, ngakho-ke, abalandeli.online ngeke bakwazi ukukuqinisekisa ukungabikho kwamagciwane noma ezinye izinto ezingadala ushintsho ezinhlelweni zamakhompyutha (i-software ne-hardware) yoMsebenzisi noma kumadokhumenti abo kagesi namafayela aqukethe kuwo.
• Gcina, ushicilele futhi / noma udlulise idatha, imibhalo, izithombe, amafayela, izixhumanisi, isoftware noma okunye okuqukethwe okungathandeki ngokuya ngezinhlinzeko zomthetho ezisebenzayo, noma lokho ngokuya ngesilinganiso sabalandeli.online ngokuba semthethweni, ubudlova, ukusongela, ukuhlukumeza, ukuhlambalaza, okuyihlazo, okunyanyekayo, okucwasa ngokwebala, okucasulayo noma okungathandeki noma okungekho emthethweni noma okungadala ukulimala kwanoma yiluphi uhlobo, ikakhulukazi ezocansi.
Njengomsebenzisi, waziswa ukuthi ukufinyelela kule webhusayithi akusho, nganoma iyiphi indlela, ukuqala kobudlelwano bezohwebo ne-Online SL ngale ndlela, umsebenzisi uyavuma ukusebenzisa iwebhusayithi, izinsizakalo zayo nokuqukethwe ngaphandle kokwephula umthetho okwamanje, ukuthembeka okuhle nokuhleleka komphakathi. Ukusetshenziswa kwewebhusayithi ngezinjongo ezingekho emthethweni noma eziyingozi, noma lokho, nganoma iyiphi indlela, kungadala ukulimala noma kuvimbele ukusebenza okujwayelekile kwewebhusayithi akuvunyelwe.
I-Online SL iqinisekisa ubumfihlo bemininingwane yomuntu enikezwa ABASEBENZISI kanye nokwelashwa kwabo ngokuya ngomthetho wamanje wokuvikelwa kwemininingwane yomuntu, njengoba sebethathe amazinga okuphepha adingeka ngokomthetho okuvikela imininingwane yomuntu.
Abakwa-Online SL bathembisa ukusebenzisa imininingwane efakwe kufayela elithi "Abasebenzisi be-WEB AND SUBSCRIBERS", ukuhlonipha ubumfihlo bayo nokuyisebenzisa ngokuhambisana nenhloso yayo, kanye nokuthobela isibopho sayo sokubasindisa kanye nokuguqula zonke izindlela ukugwema ukuguqulwa, ukulahleka, ukwelashwa noma ukufinyelela okungagunyaziwe, ngokuya ngemibandela yeRoyal Decree 1720/2007 yangoDisemba 21, evuma iMithethonqubo yokuthuthukiswa koMthetho we-Organic 15/1999 kaDisemba 13, Ukuvikelwa Kwemininingwane Yakho.
Le webhusayithi isebenzisa amasistimu ahlukile wokuthwebula imininingwane yomuntu ebalulwe kuNqubomgomo Yobumfihlo nalapho okusetshenziswa khona nezinhloso kubikwa ngokuningiliziwe. Le webhusayithi ihlala idinga imvume yangaphambili yabasebenzisi ukucubungula idatha yabo yomuntu ngezinhloso ezibonisiwe.
Umsebenzisi angasebenzisa, maqondana nedatha eqoqiwe, amalungelo aqashelwa ku-Organic Law 15/1999, wokufinyelela, ukulungiswa noma ukukhanselwa kwedatha nokuphikiswa. Ukuze usebenzise la malungelo, umsebenzisi kufanele enze isicelo esibhaliwe futhi esisayiniwe angasithumela, kanye nefothokhophi ye-ID yakhe noma idokhumende elilinganayo, ekhelini leposi le-Online SL noma nge-imeyili, unamathisele ikhophi ye-ID ku: info (at) abalandeli.online. Ngaphambi kwezinsuku eziyi-10, isicelo sizophendulwa ukuqinisekisa ukusetshenziswa kwelungelo ocele ukulisebenzisa.
I-Online SL yazisa ukuthi kukhona amafomu wezikhalazo atholakala kubasebenzisi nakumakhasimende.
Umsebenzisi angenza izimangalo ngokucela ishidi lakhe lezimangalo noma ngokuthumela i-imeyili ku-info (at) abalandeli.online ekhombisa igama nesibongo sakho, insizakalo noma umkhiqizo othengiwe futhi usho izizathu zesicelo sakho.
Ungaphinda uqondise isimangalo sakho ngeposi leposi ku: Online SL, usebenzisa, uma ufisa, ifomu lesimangalo elilandelayo:
Ukunakwa: Online SL
Ngalezi Zimo Ezijwayelekile, awekho amalungelo obunikazi obuhlakani noma ezimboni anikezwa ngaphezu kwabalandeli bewebhu.online onompahla yabo engokwakwa-Online SL, ukukhiqizwa kabusha, ukuguqulwa, ukusatshalaliswa, ukuxhumana komphakathi, okwenza kutholakale emphakathini, ukukhipha akuvunyelwe kuMsebenzisi. , ukusetshenziswa kabusha, ukudlulisa noma ukusetshenziswa kwanoma yiluphi uhlobo, nganoma iyiphi indlela noma inqubo, yanoma iyiphi yazo, ngaphandle kwalapho kuvunyelwe ngokomthetho noma kugunyazwa ngumnikazi wamalungelo ahambisanayo.
Uma kwenzeka umsebenzisi noma umuntu wesithathu ebheka ukuthi kube nokwephulwa kwamalungelo abo asemthethweni okuvikela ubunikazi bokusungula ngenxa yokwethulwa kokuqukethwe okuthile kwiWebhu, kumele bazise i-Online SL ngesimo esibonisiwe:
I-Online SL yenqaba noma yimuphi umthwalo maqondana nemininingwane etholakala ngaphandle kwale webhusayithi, ngoba umsebenzi wezixhumanisi ovele ukwazisa kuphela uMsebenzisi ngobukhona beminye imithombo yolwazi ngesihloko esithile. I-Online SL iyaxolelwa kuwo wonke umthwalo wokusebenza okufanele kwezixhumanisi ezinjalo, umphumela otholwe ngezixhumanisi ezishiwo, ubuqiniso nokuba semthethweni kokuqukethwe noma imininingwane engatholwa, kanye nomonakalo uMsebenzisi angabhekana nawo ngenxa yolwazi olutholakala kuwebhusayithi exhunyiwe.
I-Online SL ayinikezi siqinisekiso futhi ayibophezelekile, kunoma ikuphi, ngomonakalo wanoma yiluphi uhlobo olungabangelwa:
Ngokuvamile, ubudlelwano phakathi kwabalandeli buxhumene nabasebenzisi bezinsizakalo zayo ze-telematic, abakhona kule webhusayithi, bangaphansi komthetho waseSpain namandla kanye nasezinkantolo zaseGranada.
Esimweni lapho noma yimuphi uMsebenzisi enemibuzo mayelana nalesi saziso esingokomthetho noma noma yimiphi imibono ku-webalandeli.online ungaya kwi-info (at) abalandeli.online
abalandeli.online inelungelo lokushintsha, nganoma isiphi isikhathi futhi ngaphandle kwesaziso sangaphambilini, isethulo nokuhlelwa kwabalandeli bewebhu.online njengoba lesi saziso esingokomthetho.